Izono Eziyisikhombisa Eziyingozi Zokumaketha KwamaSMS | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 8, 2014 NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 Douglas Karr
Imiyalezo ebhaliwe iqhubeka nokuba yindlela emangalisayo yokumaketha kepha akuyona eye-sexy kakhulu ngakho-ke empeleni akukho msindo omningi ngayo. Kufanele kube khona. Ukumaketha kwe-SMS (ne-MMS iba yinto ejwayelekile) kuyaqhubeka nokushayela imiphumela emangalisayo. Uma ungumthengisi uzama ukushayela ithrafikhi yonyawo, uzothola ukuthumela isaphulelo noma okhethekile ngomyalezo wombhalo osebenza ngendlela emangalisayo.
Lokho kusho ukuthi, eminyakeni edlule izinkampani ziqhubekile nokwenza kahle imizamo yazo yokumaketha nge-SMS futhi zathola ukuthi yini okusebenzayo - nokuthi yini engasebenzi uma kukhulunywa ngaleli su lokumaketha elingumakhalekhukhwini. Abantu bakwa-TextMarketer bahlanganise le infographic emnandi ku- Izono Eziyisikhombisa Eziyingozi Zokumaketha Kwamaselula njengoba kubhekiswa kwi-SMS.
Nayi inguqulo yevidiyo ye-infographic:
Tags: ukumaketha amaselulaSMSukumaketha i-smssms amaphuthaumaketha umbhaloumlayezo wombhaloukumaketha imiyalezoamaphutha omlayezo wombhaloimiyalezoumaki wombhalo
Amathrendi Wokumaketha Okuqukethwe ka-2014